Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJalimane » I-Germany isetha irekhodi elisha le-Electric Vehicles
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ukuqashwa kwezimoto • Izindaba zaseJalimane • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ukusimama Izindaba • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
I-Germany isetha irekhodi elisha le-Electric Vehicles.
Iphesenti lezimoto zikagesi phakathi kwezimoto zaseJalimane ezisanda kubhaliswa liphezulu kakhulu, lidelela ukuphazamiseka kwamanje embonini yezimoto.
Ngenyanga ka-October, ngokokuqala ngqá, izimoto ezisebenza ngogesi zaba amaphesenti angu-30.4 ezimoto ezintsha ezibhalisiwe eJalimane.
Imajini yenzuzo yezimoto ezisebenza ngogesi iphezulu impela, ngoba umbuso waseJalimane uxhasa ukuthengwa kwama-EV ngemali efika ku-EUR 6000.
Abathengisi banikeza isaphulelo sika-EUR 3000, okwenza abathengi bacabange ukuthi manje yisikhathi esifanele sokuthenga imoto.
Ngenkathi ukuthengiswa kwezimoto ezijwayelekile kube nokushoda kokuhlinzekwa kanye nezikhathi ezinde zokulethwa, ama-EV ayaphuma ekudayiseni eJalimane. I I-German Association of the Automotive Industry (VDA) uthi ngenyanga ka-Okthoba, okokuqala, izimoto kagesi yenze u-30.4 wamaphesenti okubhaliswa kwezimoto ezintsha. Lokho kungenxa yokuguquguquka kwamanje kwemakethe.
"Incazelo ilula," kusho uchwepheshe wezimoto waseJalimane Trade & Invest uStefan Di Bitonto. “Abenzi bezimoto banquma ukuthi yiluphi uhlobo lwezimoto abalunikeza izingxenye ezifana nama-semiconductors. Imikhawulo yenzuzo ye izimoto kagesi okwamanje ziphezulu kakhulu. Lokho kungenxa yokuthi umbuso waseJalimane uxhasa ukuthengwa kwama-EV ngemali efika ku-EUR 6000. Ngaphezu kwalokho abathengisi banikeza isaphulelo sika-EUR 3000, okwenza abathengi bacabange ukuthi manje isikhathi esifanele sokuthenga imoto. Ngakho-ke kunengqondo ukubeka ama-semiconductors kuma-EVs. Wonke umuntu nxazonke uyazuza.”
Izinombolo ziyakufakazela lokho. Izimoto ezingu-178,700 sezizonke zabhaliswa eJalimane ngo-Okthoba, ukwehla kwanyanga zonke ngamaphesenti angu-35. Kube nokubhaliswa okusha kwe-EV okungu-54,400, okukhuphuke ngamaphesenti ayi-13. Futhi ukubhaliswa kwezimoto ezishayelwa ngamabhethri (BEVs) ngokungafani nama-plug-in hybrids (PHEVs) kukhuphuke ngamaphesenti angama-32 ngenyanga. Kuwumkhuba obonakala uqinisekile ukuthi uzoqhubeka esikhathini esifushane.
"Izibonelo zaseChina naseNorway, kanye nase-US kuze kufike kuTesla, ziphakamisa ukuthi uma amaphrimiyamu okuthenga umbuso eqhubeka kuleli zinga, izibalo zokuthengisa nokubhaliswa kwama-EV zizochuma," kusho u-Di Bitonto. “Le ngxenye yemakethe yezimoto iyakwazi ukumelana nokushoda kwezimoto ngenxa yokuthi abakhiqizi bezimoto bazoqhubeka nokusebenzisa izinsimbi abanazo ukuze bakhe izimoto ezingenisa imali kakhulu.”
Izinombolo zanyanga zonke ziza phakathi kokuqhuma okuvamile kokuduma kuma-EV eJalimane. Imoto kagesi ukubhaliswa okungaphezu kokuphindwe kathathu, kusuka ku-63,281 kuya ku-194,163, kusuka ngo-2019 kuya ku-2020, ngokusho kwesikhungo sikahulumeni waseJalimane i-KBA. Futhi angu-115,296 ama-EV abhaliswe kusukela ngoJanuwari kuya kuMeyi walo nyaka kuphela.
"Kusobala futhi ukuthi ukwamukelwa kwama-EV eJalimane kuyakhula," kusho u-Di Bitonto. “Kuwumkhuba oqinisanayo. Abantu bathenga ama-EV manje ngoba kunenzuzo ukwenza kanjalo, kodwa ukwanda kwenani lama-EV emigwaqweni cishe kuzothuthukisa ukuthandwa kwawo ngaphandle kokushoda kwamanje.”